Premium Link Generators — MYSTERY ZILLION
February 2010 edited March 2010 in Rapidshare Account
Premium Account ရှိမှ ဒေါင်းဖို့ အဆင်ပြေတဲ့ site တွေ ဥပမာ - Rapidshare၊ Hotfile link တွေအတွက် account မရှိလည်း ဒေါင်းလို့ရအောင် link တွေကို generate လုပ်ပေးတဲ့ website တစ်ခုကို ညွှန်ပြပေးပါမယ်။
သူ့ site ထဲကို ၀င်ပြီးရင် .. ကိုယ်ဆွဲချင်တဲ့ Rapidshare link တစ်ခုကို ထည့်၊ ပြီးရင် Get Premium Link ကို နှိပ်ပြီး ခဏလောက် စောင့်ပေးပါ..
generate လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Download Link buttom ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.. အဲ့ဒါကို click ပြီး ဒေါင်းလို့ရပါပြီ ..
Hotfile link ကို ဒေါင်းချင်ရင်တော့ အပေါ်က tap တွေမှာ Hotfile tap ကိုရွေးရမှာဖြစ်တယ်.. hotfile, hotfile2, hotfile3 ဆိုပြီး သုံးခုရှိတယ်။ ကြိုက်တာရွေးပြီး ဒေါင်းလို့ရပါတယ်..
Rapidshare နဲ့ hotfile link ပဲ မဟုတ်ဘူး.. Depositfiles, Netload, Filafactory link တွေကိုပါ generate လုပ်ပြီး ဒေါင်းလို့ရပါတယ်..
idm နဲ့စမ်းကြည့်တာ rapid က ဖိုင်တွေကိုတော့ ၁ လိုင်းပဲ ပေးဆွဲပြီး hotfile နဲ့ တခြား hosting တွေကိုတော့ connection ၃ လိုင်းတော့ပေးတယ်
hotfile က ဖိုင်တချို့ဆွဲချင်တာနဲ့ အတော်ပါပဲ
Rapid က နေ ဖိုင်တွေ ဒေါင်းလို့ မရလို့ စိတ်ညစ်နေတာ
ဖိုင် တစ်ဖိုင်ချင်းစီဘဲဒေါင်းလို့ရတယ် parallel ဒေါင်းလို့ရတဲ့ ဆိုက်ကလေးများမရှိဘူးလားဗျ
idm နဲ့ဆွဲပါ ၃ ဖိုင်တော့ ပေးဆွဲပါတယ်
အလကားဆွဲရတာ.. တစ်ဖိုင်ပြီးမှ တစ်ဖိုင်ပေါ့.... softlight ကလည်း လောဘကြီးရ၀ူးလေ . ဟီး
အဲ့ဒီ linebay.com ကို.. PhProxy Inbasic ဆိုတဲ့.Mozilla add-on လေးနဲ့တွဲသုံးဗျာ.. ဒီမှာယူလိုက်ပါ
ဒီ PhProxy Inbasic လေးနဲ့.. proxy တွေ change ပြီး..parallel download ချကြည့်ပါ...
file size ကိုတော့ ကန့်သတ်ထားတယ်ဗျနော်
heartless^devil wrote: »
ဒီဆိုဒ်က rapid ကို fiie size ကိုကန့်သတ်ထားတယ် ဒီဆိုဒ်လေးနဲ့ဆို အဆင်ပြေမလားတော့မသိဘူး hlusoe.info ဒါပေမယ့် အဲဒီဆိုဒ်ကိုတော့ မြန်မာပြည်ကလူကြီးမင်းများက denied ထားပါတယ်ခင်ဗျား ဘန်းကျော်သားတွေ သုံးတတ်သလိုလေးသုံးကြည့့်ပါ သူေးလးက file အရေအတွက်ပဲကန့်သတ်ထားတာ 0/4 ဆို4file ပွဲဆွဲပေါ့ဗျာ1g ရှိတဲ့ file လည်းဆွဲလို့ရတယ် ဟီး သဘောပြောပြတာနော် file site မကန့်သတ်ထားတာကိုပြောချင်တာ
ကျနော်ကတော့ File Sharing ကို www.yousendit.com ကနေသုံးတယ်ဗျာ. မဆိုးဘူး။ အဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်ခါပို့ရင်တော့ maxi 100 Mb ပဲရတယ်။ ခွဲလို့လို့ရတဲ့ ဟာဆို အဆင်ပြေပါတယ်။
The domain (linebay.com) is now on sale.